Indlu yobugcisa bokuphila ubomi obonwabisayo
Igumbi lakho lokulala e unquphantsi sinombuki zindwendwe onguElizabeth
Ifakwe kwelinye lawona macandelo alungileyo ephondo, kuba iibhloko ezimbini ukusuka elunxwemeni lwaseLas Palmas. Indawo ekhuselekileyo, enokubekwa kweliso ngamapolisa ngokusisigxina. Ngaphakathi kwendlu, uya kufumana uthotho lweendawo zokutyela, iipari ze-ayisikrimu, ii-kiosks ezineendidi ezahlukeneyo zokubonelelwa kwezitya eziqhelekileyo, izitya zamazwe ngamazwe ezifana nokutya okukhawulezayo kweyona nto ingcono! Ukongeza ekubeni licandelo lolonwabo kwiphondo laseGreen, ungonwaba ngeendawo zomculo kunye nomdaniso kwesona sigqi seTropiki.
Indlu yamaKoloniyali, entsha, epholileyo, enomoya wosapho, kunye nemikhosi ethanda ubugcisa, umculo, kunye nokutya okunempilo, ukutya kwasekuseni okumnandi kunikwa iziqhamo, ukutya kwaselwandle, okulungiselelwe ngothando.
I-El Farol ebumelwaneni, Sector Las Palmas yenye izithuba ezininzi ezityelelwe bakithi, ngokuba zokuqubha ezintle, ipaki mihla, koojingi open-air, iipaki zabantwana, zokutyela abaninzi ukutya ngazo nento gourmet, kunye impepho kuhlaziya kakhulu, kwaye ukutshona kwelanga okuhle
Kuya kufuneka ndixelele iindwendwe zam ezibekekileyo ukuba banomhlobo wobundwendwe kwaye siyakonwabela inkampani yethu, uya kuba nendawo yokuphumla kwaye ukuba uyathanda ngelixa ndifumaneka, uya kuba nenkxaso yam kukhenketho lwakho okanye nayiphi na imfuneko.
Kuya kufuneka ndixelele iindwendwe zam ezibekekileyo ukuba banomhlobo wobundwendwe kwaye siyakonwabela inkampani yethu, uya kuba nendawo yokuphumla kwaye ukuba uyathanda ngelixa nd…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Esmeraldas